uyicima njani iphone yakho
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Ungayicima njani i-iPhone yakho
Iifowuni zeapile kunye neeapos zihlala zikho konke malunga nokuhlengahlengisa, ukwenza lula, ukusetyenziswa ngokulula. Babelula kakhulu ukusongela intloko yakho ngasemva xa babenezitshixo ezi-4 ze-harware-amaqhosha amabini evolumu, iqhosha lamandla, kunye neqhosha lasekhaya elicinezelekileyo. Kodwa, okoko uyilo lwe-XS ye-iPhone, ezi ziye zatshintshwa zajikeleza kancinci. Isitshixo esikhulu, esimilise ipilisi ngasekunene sinokubonakala ngathi sisitshixo samandla, kodwa enyanisweni liqhosha leSiri, akukho nto iphambi kwesixhobo, kwaye ukwazisa ngesenzo kuye kwaziswa.
Oko & apos; ayitsho ukuba i-iPhone ngoku sisixhobo esintsonkothileyo ukusebenza. I & apos; s nje ukuba amaqhosha esiwaziyo kwaye siyabathanda baneendima ezahlukeneyo kwaye ngoku kufuneka sisongele iintloko zethu kulo mbono. Izinto zokuqala onokuzibuza zona zezi:
Ungayicima njani i-iPhone 11? Ndiyibuyisela njani kwakhona i-iPhone XR yam?
Ngaba ndisasebenzisa iqhosha lamandla ukucima i-iPhone SE (2020)?
Uyinyanzela njani ukuba iqale kwakhona i-iPhone 11 / i-iPhone XR / i-iPhone XS / i-iPhone X?
Uyinyanzela njani ukuba iqale kwakhona i-iPhone SE (2020)?
Masikhawuleze sikwenze oku ngokukhawuleza okukhulu!
Ungayicima njani i-iPhone 11 / i-iPhone XR / i-iPhone XS / i-iPhone X?
Njengoko bekutshiwo ngaphambili, eli qhosha likhulu leepilisi ngasekunene ngoku liqhosha leSiri. Ewe, ukuba ucofa nje kuyo, iya kulala okanye ivuse ifowuni yakho. Kodwa ukuba uyayicinezela kwaye uyibambe, ibiza uSiri, endaweni yokucima ifowuni.
Ukufumana imenyu yokuvala oyifunayo, kufuneka ucofe elinye lamaqhosha evolumu (ayikhathali nokuba yeyiphi) ngasekhohlo kunye neqhosha laseSiri (lokulala) ngasekunene. Babambe kunye kunye imizuzwana emibini kwaye uya kusiwa kwimenyu engxamisekileyo, apho unesilayidi sokuvala phantsi ngaphezulu. Slayida oko kwaye ifowuni iya kucima.
Izinto ekufuneka uzijongile:
Ukuba ucinezela kwaye ukhulule ivolumu phezulu kwaye ulale amaqhosha kwangoko, uya kufumana umfanekiso weskrini endaweni yemenyu yamandla. Oku akuthethi ukuba wenza into engalunganga-bamba nje amaqhosha ithuba elide.
Imenyu engxamisekileyo ye-iPhone icacisiwe:
Uya kuqaphela ukuba unezinye iindlela ezimbini ezingxamisekileyo ezinje ngokubonisa i-ID yakho yoNyango (ekufuneka uyimisile kwi-app yezeMpilo) okanye ukuthumela isiginali ye-SOS kwabasemagunyeni abafanelekileyo kunye nabo unxibelelana nabo ngokungxamisekileyo. Zombini ezi zinto zisebenza ngesilayidi sokuqinisekisa, njengesilayida samandla ngaphezulu.
Qaphela ukuba uvula imenyu engxamisekileyo kodwa ungayicimi ifowuni, i-iPhone iya kutshixwa nge-passcode -I-ID yobuso ayizukuyivula okokuqala uzama ukuyivula. Lo ngumlinganiso wokhuseleko - ukuba ubona abanye abadlali ababi beza kuhlutha ifowuni yakho okanye bakunyanzele ukuba uyivule nge-ID yobuso, unokwenza ukuba imenyu engxamisekileyo inyuse ngokukhawuleza, eya kuthi itshixe ifowuni ngendlela ekhuselekileyo.
Enye indlela-ungayifumana njani iMenyu yokuCima amandla kwi-iPhone?
Ukuba ufuna iklasikhi yokuCima amandla kwimenyu (hayi imenyu engxamisekileyo), yenza oku kulandelelana- nqakraza ivolumu phezulu, cofa ivolumu phantsi, cinezela kwaye ubambe iqhosha lokulala. Uza kubona isikrini, esingenazo naziphi na izilayidi eziNgxamisekileyo, isilayidi esivalwayo ngaphezulu. Le ndlela iya kukhubaza i-ID yobuso, ke yona yinto ekufanayo nokucofa kunye nokubamba ivolumu + ukulala. I-apos; yinto encinci yokuhamba kancinci, sicinga njalo.
Enye indlela - cinezela amandla amaxesha ama-5
Ukuba awufuni kukhathazeka ngokucinezela nokubamba amaqhosha amabini ahlukeneyo, unokuseta i-iPhone ukuba ivule imenyu yamandla xa ucinezela iqhosha lamandla ka-5. Yiya kuseto -> i-SOS engxamisekileyo -> yokutshintsha 'umnxeba ngeQhosha laseCaleni' ukuya 'Ku'
Ngoku, ungabiza ucime imenyu ngokucinezela iqhosha lasekunene amaxesha ama-5 ngokulandelelana ngokukhawuleza. Indlela yakudala yokubamba iqhosha levolumu kunye neqhosha lokulala kunyeNgabaisasebenza.
Enye indlela - cima i-iPhone ngaphandle kokusebenzisa amaqhosha
Ukuba, ngesizathu esinye okanye esinye, awunakufuna ukusebenzisa iiqhosha zehardware, ungaya nje kuseto-> Ngokubanzi kwaye uskrole yonke indlela eya emazantsi. Kulapho, uya kufumana i-Shut Down option - cofa kuyo kwaye uyakufika kwimenyu ye-Shut Down yeklasikhi (isilayidi sokuya kuMandla kwisilayidi ngaphezulu, akukho zinketho zongxamiseko). Qaphela, le ndlela iya kukhubaza i-ID yobuso kwixesha elizayo xa uvula i-iPhone yakho.
I-iPhone SE (2020) isenayo iqhosha lamandla
I-iPhone SE (2020) esandula ukukhutshwa isenophawu loyilo oludala kunye namaqhosha e-Hardware macala onke. Iphedi ejikelezileyo engaphambili kwifowuni isebenza njengeqhosha lasekhaya kunye neleSiri (nokuba ayililo iqhosha lomzimba). Ke, emile okweepilisi kwicala lasekunene liqhosha lamandla elifanelekileyo. Yibambe phantsi kwaye uya kuba nakho ukucima okanye ukuseta kwakhona i-iPhone SE yakho.
Ungayibuyisela njani kwakhona nzima i-iPhone 11 / iPhone XR / iPhone XS / iPhone X?
Kwimeko apho i-iPhone yakho ingaphenduli ngesizathu esithile okanye esinye (isikrini asisebenzi, okanye ukubetha kwiscreen akwenzi nto), kuya kufuneka wenze oko kubizwa ngokuba 'kukusetha kwakhona nzima'. Ngokusisiseko, oku kuthetha ukuba uyalela i-iPhone ukuba iqale kwakhona ngokungasebenzisi nto ngaphandle kwamaqhosha e-Hardware. Kwaye oku, uzakufuna omathathu amaqhosha kwi-screen yakho yonke ye-iPhone.
Yenza oku ngokulandelelana: cofa ivolumu phezulu, cofa ivolumu ezantsi, cinezela kwaye ubambe iqhosha lokulala. Qhubeka ubambe malunga nemizuzwana eli-10 kwaye kuya kufuneka ubone ukuqala kwakhona kwe-iPhone kunye nelogo ye-Apple. Ukuba le ayisebenzi & i-iPhone yakho ayikaphenduli, kusenokufuneka ucwangcise utyelelo kwivenkile yokulungisa ekufuphi.
Ungayiseta njani kwakhona i-iPhone SE (2020)?
Sukuvumela iqhosha lasekhaya ukuba likukhohlise- ayisiyiyo nje iphedi yokubamba. Ke, awungekhe uyisebenzisele ukuseta kwakhona nzima njengoko ubuqhele ukwenza ngeemodeli zangaphambi kwe-iPhone 7. Ukunyanzela i-iPhone SE ukuseta kwakhona, wenza okufanayo nakwiimodeli ezintsha: cofa ivolumu phezulu, cofa ivolumu ezantsi, cinezela kwaye ubambe iqhosha lokulala malunga nemizuzwana eli-10.
Ulwesihlanu omnyama ujongana neefowuni eziphathwayo
Uthotho lwe-Apple 3 yoVavanyo
Iingcebiso zeApple kwi-iOS 10: ukuba zisebenza njani, zitshintshi & apos, indlela yokukhubaza
Idili: BeatsX, Beats Solo3 kunye nePowerbeats3 zithengisiwe ukuya kuthi ga kwi-30% isaphulelo eApple
Isicwangciso sovavanyo kunye nesiCwangciso sovavanyo